Matanho gumi Ekuvaka Nani B10B Twitter Strategy | Martech Zone
Matanho gumi Ekuvaka Nani B10B Twitter Strategic
Chishanu, July 8, 2011 Chishanu, July 8, 2011 Douglas Karr
Ini ichangobva kuverenga kuti Twitter ichine vashandisi zvakapetwa kaviri seI LinkedIn. Ne plethora yeTwitter maapplication uye kusangana, iko kusununguka kwekuti ma tweets akawedzeredzwa zvakare akakurisa zvakanyanya. Semunhu anoshandisa B2B Twitter pachezvangu, ndinogara ndichishanda zano rangu reTwitter kuenderera mberi nekuvaka zvinotevera uye nekukwezva vateereri vanonyanya kukosha. Heano mamwe marongero andinoendesa:
Ziva tarisa vateereri kutevera. Ini ndinopedza idzi mbiri nzira dzakasiyana… kutanga nekutsvaga data rezita remazwi akakosha kune vateereri vangu uye chechipiri, nekutevera vateveri veavo vari mune imwechete indasitiri yandiri. Maitiro ese aya ari nyore kushandisa zvishandiso senge TweetAdder. Muchokwadi, ini handina kuwana chishandiso chiri nani chayo! (Hongu, icho chinobatana chinongedzo).
Panzvimbo pekurasa mibvunzo yakajairika kuvateveri vangu, ini bvunza mibvunzo yakananga kune vanhu vandinoda kutevera kana kuda kuvaka hukama navo. Mamwe maakaunzi haasi angu evateereri, asi ivo vane chiremera muindastiri uye saka ndinovabata. Kana ndakakodzera, vachataura neni uye kunyange kundisimudzira… izvo zvinopa chiremera uye zvinovaka vateveri vangu.
Ini ndinoshandisa magariro enhau kuziva mikana yekubatsira vamwe. Kana iwe uchibatsira vamwe, zvinowanzo tungamira mukuvaka hukama hwebhizinesi hunogona kupedzisira hwatungamira mukubatanidzwa kwemari. Usafunge nezvazvo se kubatsira munhu mahara… Nekubatsira pachena vamwe mundima yako yehunyanzvi, nyika iri kukutarisa iwe uchibatsira vamwe. Sezvo ivo vachikuona iwe uchibatsira, ivo vanozorangarira… uye vanokufonera iwe pavanoda rubatsiro.
Ini ndinoshandisa Twitter zvinoshandiswa kubatsira kubata tsvakiridzo, inotevera, tweeting, uye kupfupisa zvinongedzo. Twitter.com, saiti, inotyisa pane izvi. Asi kunyorera senge TweetDeck, Seesmic uye Hootsuite zvinonakidza. Vanokutendera iwe kuti utarisise hurukuro zvakanyanya zvakanyanya.
I kubhadhara kukurudzira nhoroondo yangu pane saiti senge TwitterCounter. Pane ku kutenga vateveri, inova nzira inotyisa inokonzeresa matani evateveri ve spammy vanosiya mazuva anotevera, saiti senge TwitterCounter inokwezva vashandisi vakakomba vanozobatana neni kana vakandiwana ndakakodzera.
Ini ndinowanzo shingairira hurukuro ine gakava uye neruremekedzo nharo kupokana kwangu. Wese munhu anoda gakava rakanaka… kunyanya pane iri nyaya inobata. Panzvimbo pekufunganya pamusoro pekugumbura vanhu, ndinozvitarisa sekusefa vanhu ivavo ini ndingangodaro ndisingade kuita bhizinesi zvakadaro! Usatya kusvetukira mukusawirirana, ingo zviite zvine ruremekedzo (kunyangwe zviine huipi hwakadii).
I kusimudzira… munhu wese. Kunyangwe makwikwi evatengi vangu uye angu makwikwi anowana kutarisisa kubva kwandiri. Icho chokwadi ndechekuti ivo vanoburitsa zano rinoshamisa neruzivo zvinoshanda kune vateereri vangu. Nekugovana irwo ruzivo nevateereri vangu, ndiri kuwedzera kukosha kweTweeting yangu nevateveri vangu… hapana kana chinhu chakaipa.
Ndinoedza usambotaura nezvangu. Hapana ane hanya newe uye nezvauri kuita. Ivo vane hanya nezvekukosha kwaunounza kwavari. Kana ndiri kuenda kunze kwenyika kwechinguva, ndinogona kuudza vanhu nei. Kana ndiri kuenda kuchiitiko chinogona kuve chakakurumbira, ndinogona kuchinyora ... asi ndezvekuti ndikwanise kusangana nevateveri vangu. Ini ndichave akatendeseka kuti ndinokurumidza kudzinga vanhu vanozivisa zvavaive nazvo kwekudya kwemangwanani, nezvimwe. Hapana ane hanya… kunyanya vanhu vari kutsvaga kuvaka yakakosha bhizinesi network pamhepo. Icho tsvina ndeye Facebook. 🙂
ndinoshandisa hashtags sezvazvinogona. Kunyatso kushandisa ma hashtag izvo vamwe vari kutsvaga zvinogona kuvaka iyo nhamba yevanhu vanowana zvemukati uye nekuvaka zvinotevera. Usatorere pasi simba rechiratidzo #!
Kana ndisina chinhu chakanaka kuTwitter, ini twut heck up! Dzimwe nguva zuva kana maviri anozopfuura asina kukodzera tweet kubva kwandiri. Ini ndakanaka nazvo… chinhu chekupedzisira chandiri kuda kuita kuzadza vateveri vangu hova nezvisina basa zvirimo!
Kana iwe uine bhizinesi, iwe unonzwisisa kuti kumirira foni kurira ndiyo ingangoita inokurumidza nzira yekubhuroka. Kana iwe uchida kuve mukukurukurirana, iwe unofanirwa kuve unoita nekutyaira, kupindura, kutungamira, uye kuita hurukuro iri kuitika izvozvi.
Mabhizinesi ari pa Twitter. Mabhizinesi ari kutsvaga iwe nevanokwikwidza. Mabhizinesi ari kutsvaga mhinduro. Kana usipo kuvabatsira, usatarisira kuti vakutsvage. Unofanira kunge uri pamberi pavo nguva dzose… nemhinduro dzakakodzera panguva yakakodzera.
Fortune 100 neSocial Media
Wedzera Tsika Yemashure kune WordPress 3
Jul 9, 2011 pa 1: 37 AM
chii chaunoda kushandisa kuti utarise zvinongedzo zvaunogovana kuburikidza neTweets, kana iwe?
Jul 9, 2011 pa 2: 18 AM
Ini ndinoshandisa Hootsuite kana Bit.ly yekubatanidza. Kana iri yemushandirapamwe chaiyo, ini ndichaisa mushandirapamwe wekutevera kodhi pairi kuitira kuti ndione kushanya muAnalytics.
Jul 10, 2011 na5: 44 PM
Kwandiri B2B pa twitter zvese zvine chekuita nekuvaka hukama 🙂
Jul 11, 2011 na3: 56 PM
Zvakanaka zvinhu, Doug. Twitter zvakare inzvimbo huru yekutarisa akawanda egos vanozvigadzirira. Ndine mhosva semunhu anotevera kana zvasvika pakuratidza neka Twitter kushinga. Nezvishoma chaizvo chaizvo, zvinyorwa zvitsva zviri kugoverwa pakutanga paTwitter, isu pachinzvimbo tinoona gungwa rezvekutenda, vazhinji vachinongedzera kune imwechete yekutanga masosi. Kune, zvisinei, nzira dzinoverengeka izvi zvinova zvinobatsira. Mumwe anogona kuwana pfungwa yekuti chiito chekudzokororazve hwindo remukana wekunyatsonzwisisa mafungiro emunhu. Iwe unogona zvakare kuishandisa zvine simba kwazvo kune inoenderera kuongorora. Uye sekuziva kwako, kune maapplication kunze uko kuti abatsire kuita zvese izvi zvinobudirira. Kwandiri, zvakadaro, Twitter inzvimbo huru yekutanga yekuve nazvo uye nekuchengetedza zvine hungwaru dialog nevanhu. Uye izvi ini ndinonzwa ndipo panokosha kukosha chaiko. Semuenzaniso, kana iwe uchitaurirana muTwitter, handingashamiswe kuvaona vachiwedzeredzwa kubhuku rako remubatanidzwa, kune rako Facebook peji, kune vanhu vari kugadzirisa kuBlog Talk Radio. Ndiri kuona akawanda masangano izvozvi achifunga nezveTwitter seimwezve nzira yekushambadzira, apo vasina kana kudzidza kusvika pakushandisa kungotaura nevatengi vavo. Pupurira iko iko kuchinjika kune mantra ye ROI uye haugone kubatsira asi kufunga kuti makambani mazhinji haasati awana. Zvakafanana sezvazvaimbove.
May 10, 2012 pa 2: 09 PM
"Ndinobvunza mibvunzo yakanangana nevanhu vandiri kuda kutevera kana kuda kuvaka hukama navo". Ndeupi rudzi rwemibvunzo iwe yaunobvunza?
May 17, 2012 pa 7: 19 PM
@ google-aa522cbe3de1ac803a0cf795b19e8a3a: disqus, zvandiri kureva nezvazvo ndezvekuti ndinotora nguva yekunyatso tarisa maprofiles avo uye masayiti kuti ndione mibvunzo yakanaka inoratidza kuti ndanyatsoita homuweki yangu. Pa Twitter, ndinogara ndichiona vanhu vachipindirana nezvinhu zvakaita sekuti "Ndiudze bhuku rauri kuverenga"…. uye ndinoziva kuti havana kana nguva yekufarira mune zvandiri kuverenga. Pane kudaro, ini ndinoda kuverenga zvishoma nezvavo uye kuvabvunza iwo mubvunzo ivo chete wavanogona kupindura.
Semuenzaniso - ndakaona kuti unoshanda nekambani yeecommerce uye zvinoita sekunge unoshanda neMagento? Tine vatengi vashoma vanoshandisa Magento uye vanowanzo tsvaga zviwanikwa nguva nenguva zvekubatsira - irwo rudzi rwebasa raungaite?
Kukadzi 14, 2013 na5: 11 PM